Polisim-pirenena : Hametraka fitoniana -
AccueilSongandinaPolisim-pirenena : Hametraka fitoniana
Polisim-pirenena : Hametraka fitoniana
Hatao vaindohan-draharaha ny ady amin’ny asan-jiolahy sy ny fakana an-keriny eto amintsika. Io no nambaran’ny tale jeneraly vaovao hisahana ny filaminana eo anivon’ny polisim-pirenena, nandritry ny lanonana famindram-pibaikoana, teny amin’ny “Ecole Supérieur de la Police Nationale” (Ensp) Ivato, omaly. Paikady mialoha ho fisorohana ny asa ratsy tsy ho tanteraka ataon’ny eo anivon’ny polisim-pirenena amin’ny firongatry ny asan-jiolahy sy ny fakana an-keriny izay nahazo vahana tato ho ato. Nohamafisiny tamin’io fotoana io koa ny fitandroana ny filaminana ho fametrahana ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Hamafisina ny paikady tsy hisian’ny korontana vokatry ny resaka tsy fandriam-pahalemana mialoha sy aorian’ny fifidianana. Efa tsy takona afenina intsony mantsy amin’izao vanim-potoana manakaiky ny fifidianana izao ny fihantsiana eo amin’ny andaniny sy ankilany. Efa nisy ny lamin’asa efa napetraky ny polisim-pirenena nisamborana ireo mpaka an-keriny tamin’ny alalan’ny fidinana ifotony tany amin’ireo faritra mafana. Saika voasambotra tamin’izany avokoa ireo tena tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny ireo teratany karana nisesy teto an-drenivohitra. Miisa folo ireo tompon’antoka nosamborina tamin’izany. Mbola hotohizana ireo ezaka efa natomboka mba hisian’ny fitoniana, hoy ihany ny nambaran’ny Tale jeneralin’ny filaminam-bahoaka eo anivon’ny polisim-pirenena tamin’ny lahateniny. Natsidiny nandritry ny fotoana ihany koa ny raharaha kolikoly, izay fanetriben’ny firenena sy manohintohina amin’ny fanatanterahana ny asany.
Nandritra io lanonana notanterahina omaly io no notolorana mari-boninahitra ireo tompon’andraikitra teo anivon’ny polisim-pirenena. Ireto avy izy ireo, Rafanomezantsoa Roger nandray ny toerany amin’ny maha-tale jeneraly hisahana ny filaminana eo anivon’ny polisim-pirenena, rehefa nomen’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka ny Contrôleur General ny fibaikoana. Teo ihany koa ny famindram-pahefana teo amin’ny talem-paritany ny filaminam-bahoaka ho an’ny faritanin’Antananarivo Rakotozanany Dany Marius, izay nisolo ny toeran’ny talem-paritra teo aloha Randriananjomanana Georges Joel. Ny fanolorana ny fahefana teo amin’ny Commissaire Divisionnaire de police Randriambelo ny Aina, izay hisolo ny tale jeneralin’ny sekoly teo aloha Guy Ran. Ity izany no nisy vehivavy voalohany hitarika ireo mpianatra ho polisy eo
anivon’ny sekoly sekoly ambonin’ny polisim-pirenena. Nambarany “fa vonona hisahana ny andraikitra nanendrena azy ny tenany, ary handray ny adidy masina tokony ho sahaniny, hoy ihany ny nambaran’ny talen-tsekoly nandritry ny lanonana ara-miaramila.” Etsy andanin’izay dia mbola tsy mahavita tena amin’ny fiantsorohana ny adidy sy andraikitra amin’ny fitandroana ny fahalemana ny polisy, raha ny nambaran’izy ireo. Mangataka fiaraha-miasa amin’ny vahoaka izy ireo hisian’ny fanomezam-baovao. Na dia aza anefa dia efa azo tsapain-tanana ny ezaka vita raha ny tarehimarika nivoaka, raha toa ka efa nahatratra 836 ny olona voasambotra tamin’ny asan-jiolahy, halatra tsotra, fanendahana, sy ny fanafihana mitam-basy. Miisa 10 kosa ny jiolahy miandry ny fitsarana amin’ny fakana an-keriny taorian’ny nanolorana ny raharaha teny anivon’ny fampanoavana. Tontosa araka ny lamina napetraka noho izany ny famindram-pahefana teo amin’ireo tompon’andraikitra teo aloha sy ny vaovao avy eo anivon’ny Polisim-pirenena. Natao teo ambany fiahian’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka Eric Michel Idrissa, izay notronin’ireo manamboninahitra isan-tsokajiny.
안전공원 dans Sortie de Air Madagascar de l’annexe B
Seo dans Kepel: «L’État islamique vise l’installation du califat sur les ruines de l’Europe»
Kung Fu tarihin’i Maitre Avoko : Vonona hampandany izay kandidan’ny HVM
Health And Fitness: You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that…
안전공원: Title [...]one of our guests just lately encouraged the following website[...]
Seo: fantastic put up, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not realize this. You must…